Jcb Inkampani namuhla omunye abakhiqizi elikhulu imishini ekhethekile futhi imishini. amakhasimende ayo akwazi ukuthenga abangaphezu kuka-250 amamodeli we imishini ehlukahlukene: yokulahla amaloli, abembayo, kogandaganda, Loaders. Ikhishwa imishini ekhethekile kabanzi izimayini, ukwakhiwa, umgwaqo, ezolimo kanye nezinye izimboni. ukwenziwa imishini Jcb izimboni zitholakala emazweni elikhulu kunawo wonke eYurophu, e-Asia, eNyakatho naseNingizimu Melika abaye. Okulandelayo ezocatshangelwa imishini ekhethekile, okuyinto abamele ezivelele umugqa oyinhloko emphahleni.
Incazelo Jcb ugandaganda
A indawo ekhethekile umugqa nemishini ekhethekile ezivezwa inkampani kuthatha Jcb ugandaganda. Lo mshini libhekene yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi ngokushesha nakalula. Jcb ugandaganda livame ukusetshenziswa lapho ukwakhiwa komgwaqo isebenza. Futhi, lo mshini okhethekile livame ukusetshenziswa Tinsita kamasipala ukwenza imisebenzi yabo. Abalimi usebenzise ugandaganda ekuziphatheni nemisebenzi yezolimo, ukwakhiwa - yokwemba nokusingatha.
Uma ufaka nezinamathiselo ozikhethela Jcb ugandaganda ke zingaphendulwa zibe yizindawo yokuhlanganela idivayisi Amatebhe, okuyinto kuyoba owusizo ekufezeni imisebenzi elandelayo:
Isakhiwo nendlu udoti,
nginisela zasemazweni kanye ebusweni komgwaqo,
yokuhlanza endleleni esuka iqhwa.
Ibhanga tractor imelelwa izinhlobo ezahlukene imishini. I-apharathasi ezihlongozwayo kungaba on amasondo noma amathrekhi isibungu. Bonke babe ezahlukene izici lobuchwepheshe okuyinto kahle ukuhlukanisa le ndlela ethile, phakathi kwabanye. Ngokwesibonelo, Jcb GT ugandaganda ingenye sezitimela ezinejubane kakhulu emhlabeni futhi ingafinyelela ngesivinini kuze kufinyelele 116 km / h.
Incazelo-Loader ugandaganda Jcb
Ugandaganda Loader Jcb - okuyimfanelo, jikelele, ngempumelelo futhi ukusebenza okuphezulu idivayisi singamethemba ukwenza anhlobonhlobo imisebenzi. Ukusebenzisa umshini okunjalo okukhethekile eyenziwa kalula ukucutshungulwa, ezokuthutha kanye loading izinto ezihlukahlukene okuxekethile ezifana nenhlabathi, isihlabathi, amatshe, amalahle, idwala othulini. Yingakho ezihlukahlukene izinkampani ezimbonini kanye nokwakhiwa usebenzisa ugandaganda-Loader Jcb.
Umumo imishini ekhethekile nhlobonhlobo. Jcb inkampani ekhiqiza tractor, Loaders zinhlobo ezilandelayo:
amadivaysi Front avame ukusetshenziswa lapho besebenza zimba ka imisele, emiseleni, imigodi. Kabanzi enjalo tractor Loaders emkhakheni emgwaqweni.
Telescopic kudivayisi ukwahlukahlukana. Ikakhulukazi abaphumelelayo le mishini ekwenzeni lezi izinhlobo zomsebenzi, uma kudingeka baphathe wezimpahla nokuphakamisa ukuphakama eside.
tractor Fork Loaders Jcb babe maneuverability okusezingeni eliphezulu, abenze esisemqoka ekufezeni umsebenzi ukulayisha, stowage kanye ezokuthutha impahla emikhunjini ehlukahlukene amabhizinisi kwezezimboni nakwezolimo, kanye tamasipala.
Incazelo backhoe ugandaganda Jcb
Ugandaganda Excavator Jcb okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi Amatebhe. Lo mshini okhethekile iwine isihloko umsizi Irreplaceable ukwakhiwa, umgwaqo kanye imisebenzi kamasipala kanye nezinye izimboni. Phela, leli thuluzi uyakwazi ezisebenza kokubili njengoba ngogandaganda, Excavator kanye Loader.
Lo mshini okhethekile kuyinto tractor abavamile ezinamasondo, ogama phambi njengenhlangano isethi ozikhethela esingeziwe ngogandaganda ebhakedeni uhlobo, bakhulise - Excavator. the yokugcina iyatholakala bephakamisa telescopic boom uphinde wehlise.
Jcb ugandaganda: Izibuyekezo
Abanikazi tractor ahlukahlukene Jcb ukugubha nokwethenjelwa yizinhlobonhlobo yale mishini. Inzuzo yalezi amadivaysi ukuthi bakwazi ukusebenzisa ukwakhiwa, ukulungiswa kwemigwaqo nezakhiwo, futhi kwezinye izimboni. Lezi imishini ongenza ezixube imisebenzi, kusukela yokwemba imigodi futhi imisele ngaphambi kulayishwa izinto ezahlukene ngobuningi nemfucumfucu.
Okungenhla amadivayisi ezikhethekile kunezimo eziningana ezisivunayo:
Okuphansi petrol (kufika ku-20% wokulondoloza uma siqhathanisa nabanye abakhiqizi);
ukubonakala kakhulu kokubili phambi nokubuka amawindi ezingemuva;
yamandla aphezulu Excavator kanye ngogandaganda zibalwa njengothuli lwesilinganiso;
lula ukuphathwa phambi indlela.
Jcb nkampani inyathelisa ezihlukahlukene imishini ekhethekile, okuyinto ine uhla ebanzi kwezicelo futhi kungaba ukwanelisa izidingo ngisho ikhasimende olindele kunazo. tractor Universal ezikhiqizwa yilo inkampani, kukhona abasizi Amatebhe emikhakheni eyehlukene yomnotho. Lezi imishini ekhethekile ingasetshenziswa bafinyelele imigomo yabo bobabili izinkampani ezincane futhi umkhakha imidondoshiya. umnikazi ngamunye uzokwazi ukuhlola izinzuzo lobu buchwepheshe, ezifaka hlangana ukuhlahluba umnotho, izinga English, yizinhlobonhlobo, yizinhlobonhlobo, amandla nokunemba umsebenzi wenziwa.
Pepper tincture izinwele ukukhula: ukubuyekeza nezincomo
Ngifuna ukuthenga imoto enhle noma ngesithuthuthu, futhi ayikho imali, noma cha ngokwanele. Yini okumelwe uyenze?
Incazelo yaleli inkondlo "Womthandazo" Lermontov